Golaha Wakiilada Somaliland Oo Cod Aqlabiyad Ah Ku Ogolaaday Sadexdii Wasiir Ee Ugu Danbeeyay Xukuumada Siilaanyo | Araweelo News Network (Archive) -
Golaha Wakiilada Somaliland Oo Cod Aqlabiyad Ah Ku Ogolaaday Sadexdii Wasiir Ee Ugu Danbeeyay Xukuumada Siilaanyo
Hargeysa (ANN)Golaha Wakiilada Somaliland, ayaa maanta ansixiyey xubnihii u danbeeyay golaha wasiiradda xukuumada cusub ee uu dhisay Madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo), iyadoo golaha wakiiladu hore u ansixiyay 17 wasiir iyo lix wasiir ku xigeen,
balse sadexda masuul ee maanta la ansixiyay ay dalka ka maqnaayeen xiligaa.
wasiirada goluhu ansixiyay oo ay Mudanayaashu cod aqlabiyad ah ku ansixiyeen ayaa ahaa saddex wasiir, kuwaas oo kala ah wasiiradda Arrimaha Dibada, Macdanta iyo Biyaha iyo Warfaafinta.
Fadhigii Golaha Wakiilada oo ku qabsoomay Hoolka Wasaarada Arrimaha Gudaha, isla markaana uu gudoominayey Guddoomiyaha golahaa Md. Cabdraxmaan Maxamed Cabdilaahi (Cirro), waxa kasoo xaadiray 55 Xildhibaan.
waxaana Markii fadhigu furmay Guddoomiyuhu mudanayaasha ku wargeliyey in cod gacan taag ah loo qaadi doono saddexda wasiir ee loo qorsheeyey in la ansixiyey.
Intaa kadib waxa saddexda wasiir mid walba waxa la siiyey waqti kooban oo uu golaha ka horjeediyo qorsheyaashiisa uu doonayo inuu fuliyo inta uu xilka hayo, waxaanay saddexdooduba sameeyeen ballanqaadyo iyo qorshayaal ay ku shaqayn doonaan.
waxyna codaynta masuuliyiintaa lagu ansixiyay u dhacday sidan, Wasiirka Wasaarada Arrimaha debeda Somaliland Dr. Maxamed Cabdilaahi Cumar codka waxa ogolaaday 51 Mudane, 2 Mudane ayaa diiday, halka mid kale ka aamusay,
Wasiirka Wasaarada Macdanta iyo Biyaha Eng. Xuseen Cabdi Ducaale, waxa u codeeyay 53 Mudane, 1 xildhibaan ayaa diiday, isla markaana cid ka aamustayna ma jirin. Wasiirka Wasaarada Warfaafinta iyo Wacyigelinta Mr. Cabdilaahi Jaamac Cismaan waxa oggolaaday 51 Mudane, 2 mudane aayaa diiday, halka mid keliyi ka aamusay, sidaas ayaanu ku meelmaray.
Waxayna mudanayaashu sidaa ku ansixiyeen cod aqlabiyad ah sadexdaa masuul oo ka hadhsanaa 20 wasiir iyo lix wasiir ku xigeen oo golaha wasiirada xukuumada madaxweyne Siilaanyo soo dhisay, isla markaana golaha wakiiladu ansixiyeen horaantii August 2010, maraka laga reebo sadexdaa masuul oo iyagu ka maqnaa dalka.